သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောခံရဖို့အကြီး | Apg29
ယေရှုခရစ်၏အသက်ရှင်လူတစ်သင်၏အသက်တာသို့ကြွလာနှင့်သင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်သည့်အခါကိုယ်ကသာထို့နောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအသက် 20 သောအခါငါသခင်အဖြစ်သညျယရှေုလက်ခံခဲ့သည်။ ကြှနျတေျာ့ဘဝတစျခုလုံးအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ယရှေု, ငါ့ကိုသို့ကြွတော်မူသည်ငါ့ကိုကယ်တင်အပေါင်းတို့နှင့်ငါ၏အအပြစ်ကိုလွတ်စေ။
အစောပိုင်းအပေါ်, ငါသညျယရှေုနှင့်သင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုဆိုပါက, သခင်အဖြစ်သူ့ကိုလကျခံဖို့လိုအပ်ကြောင်းအကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည်သဘောပေါက်လာတယ်။ သင်ဤလက်လွတ် အကယ်. အရာအားလုံးလက်လွတ်။ ထို့ကြောင့်, ငါလူတို့နှင့်အတူပြောပြီကြောင့်ငါသည်ဤအကြောင်းပြောဆိုရန်အလွန်သတိထားခဲ့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကတည်းကရှိသည်။
ငါသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လေကိုတိုက်ရိုက်ပြီးနောက်, ငါကခရစ်ယာန်တွေဖြစ်အခိုင်အမာသူတွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်ငါယေရှုအကြောင်းသူတို့ကိုပြောနေတာစတင်ခဲ့အခါ, ငါငါသည်သူတို့မအကြောင်းပြောနေတာဘာအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးခဲ့သောထိုသူတို့၏မျက်နှာများပေါ်တွင်အသုံးအနှုန်းတွေသတိပြုမိသည်။ ငါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဤလူများသည်တစ်ဦးဘုရားကျောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့သညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိတစ်ခါမျှနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြခဲ့သည်။ သူတို့သညျယရှေုငါသည်သူတို့မအကြောင်းပြောနေတာဘာနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ရှိခဲ့ရှိခဲ့သညျ။
ဤသည်ငါ့ကိုအစပိုင်းတွင်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေး လုပ်. , ထိုအခါမူကား ပို. ပင်ငါသခင်ယေရှုနှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်သူ့ကိုလကျခံဖို့လိုအပ်ကြောင်းအကြောင်းပြောဆိုအလွန်ရှင်းလင်းသောဖြစ်ရမည်ငါ့ကိုပေးခဲ့သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လူတွေကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့လူတို့နှင့်အတူယေရှုအကြောင်းပြောဆိုပေမယ့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနှင့်အရေးမကြီးသောအရာတို့ကိုမထားဘူးဆိုရင်သူတို့ကလိမ်လည်လှည့်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ကြှနျုပျတို့ဟောပွောနဲ့အရာအားလုံးကိုအကြောင်းပြောဆိုပါလျှင်, ဟုတ်ကဲ့ကကျမ်းစာထဲက djuplodade မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖွစျစနေို, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ယေရှုအကြောင်းပြောဆိုကြဘူးလျှင်, အရာအားလုံးအနတ္တဖြစ်၏။ ဘယ်လိုလူမျိုးကိုယေရှုအားရလိမ့်မည်ငါတို့သည်သူ့ကိုအအကြောင်းပြောဆိုကြဘူးလျှင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်? ဒါဟာအားလုံးအကြောင်းကိုဖွင့်, ယရှေုပဲ! ထိုအခါသူတို့က, ငါသည်ယေရှုအကြောင်းပြောတာပေါ့အဘယျအရာကိုငါစကားကိုနား, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပင်ပြန့်ပွားအမှန်ဆိုရလျှင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့ဘုရားသခင်ကိုသိမထင်ရှားစေသည်။ ကျမ်းစာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရေးလိုက်ဤသည်သမ္မာကျမ်းစာသည်:
ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။ အကြင်သူသည်ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုနားထောငျသိတယ်။ ဘုရားသခငျ၏မဟုတ်သူမည်သူမဆိုကျွန်တော်တို့ကိုနားမထောင်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တရားနှင့်မောဟစိတ်ဝိညာဉ်၏ဝိညာဉျတျောကိုငါသိ၏။ - 1 ယောဟန် 4: 6
ငါသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါသည်ကတည်းကသူတို့ကငါ့ကိုနားမထောင်သောကြောင့်, သူတို့ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြခဲ့တိုက်ရိုက်ဤနည်း၌ထင်ရှားခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်လည်းလျင်မြန်စွာအမှန်ဆိုရလျှင်ထုတ်ဖော်။ သူတို့သညျယရှေုရှိပေမယ့်တကယ်သညျယရှေုရှိသူတို့စကားကိုနားမထောင်ချင်ကြဘူး, ထို့နောက်သူတို့သညျယရှေုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဟုဆိုသည်။
ငါမှာကွာသညျယရှေုမှသင်၏မျက်စိရရှိသွားတဲ့ကြောင့်အယူဝါဒကားဟွန်းတီးပြီးအားဖြင့်သူတို့ရဲ့မောဟပေါ်မှာငါ့ကိုရဖို့ကြိုးစားနေတစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့သညျယရှေုရှိသည်, သူတို့ရှိသည်ဟုဆိုကာအမှန်ဆိုရလျှင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြအကြိမ်ပေါင်းများစွာ။ သူတို့တကယ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. လူသိများခဲ့ပါလျှင်ယေရှုနဲ့တူဘာမှလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဘူး။
ငါသိမ်းဆည်းပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ငါလူတွေကိုယေရှုခရစ်၏ငါ၏အသွန်သင်ချက်အကြောင်းကိုဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်၏။ အဲဒါကို Self-ကယျတငျတျောမူသောအခြားလူများအဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ဖူးနဲ့ယေရှုအဘို့ထိုသူတို့အနိုင်ရရန်မလိုအပ်ခံစားရလျက်ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူး။
ယရှေုကိုအခြားလူများအနိုင်ရနိုင်ရန်အတွက်သူ့ဟာသူပြန်လည်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကိုယ်တော်တိုင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်သည်အထိအခြားလူများဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်တို့သည်လည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း, သူတို့သည်မိမိတို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းသတိထားမိဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ယေရှုခရစ်သည်အခြားလူများအနိုင်ရလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာကဘာလဲဆိုတာသိရန်အရေးကြီးသည်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဖို့ဘယ်လို။ ကမျြးစာကိုသင်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုသင်တို့သိရသင့်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကြှနျုပျတို့သညျဤသိနိုင်သနည်း ကောင်းပြီ "ဘုရားသခငျ၏နာမတျောကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်!"
ဤအမှုအရာတို့ကိုငါသင်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုသိရဘို့နှင့်ဘုရားသခငျ့နာမ၌ယုံကြည်ဖို့အတှကျဘုရားသခငျ၏နာမ၌ယုံကြည်သူသည်သင်ရေးထားပြီ။ - 1 ယောဟနျသ 5:13
ကမျြးစာကိုပြီးတော့သင်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုသိသညျယရှေုကိုယုံကြည်ဖို့ကပြောပါတယ်။ အခြားလူများထာဝရအသက်ကိုရရှိပါကနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်သငျသညျထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုသင်တို့သိရနိုငျသညျ, သငျသညျမြားကိုလညျးဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့သညျယရှေုကိုယုံကြည်ပါသလား သူတို့မကျင့်လျှင်, သူတို့သည်ထာဝရအသက်ကိုရမလိုပါ။ ကျနော်တို့ကဒီအပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောမည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့သညျယရှေုအဘို့ထိုသူတို့အနိုင်ရမရနိုငျသညျ, အခြားလူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပါကသိသောသို့မဟုတ်မပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့ကိုဘယ်လိုသိကြများနှင့်အခြားလူသညျယရှေုခရစျသအဘို့ထိုသူတို့အနိုင်ရနိုင်ရန်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရမယ်နှစ်ဦးစလုံး။
ကျနော်တို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့သူသိထားရမည်ကို၎င်း, ကယ်တင်ရှင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ငါယေရှုခရစ်၌ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းတရားသက်သေခံသောအခါ, ငါများသောအားဖြင့်ကသင်ယူဖို့, တစ်ဦးသင်းအုပ်ဆရာသို့မဟုတ်မည်သူမဆိုငါ့ကိုမကယ်မယ့်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုမမဟုတ်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ ဒါပေမယ့်ငါသူ့ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါငါ့နှလုံးသို့ကြွတော်မူသောယေရှုကိုခရစ်တော်၏အသကျရှငျလူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
ကိုယ်ကသာယေရှုနှင့်သူကယ်မနှုတ်နိုင်ထက်အခြားအဘယ်သူမျှဖြစ်ပါတယ်။ သူကသာကယ်တင်သောသခင်သည်။ သူကဘေးမှာအဘယ်သူမျှမရှိတယ်, ဒါပေမယ့်သူကသာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမျြးစာကမိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌အဘယ်သူမျှမကျွန်တော်တို့ကိုကယျတငျနိုငျလည်းမရှိကပြောပါတယ်။ ကိုယ်ကသာယေရှုနှင့်သာသူကိုကယျတငျနိုငျဖြစ်ပါတယ်။
အခြားမည်သည့်အတွက်မကယ်တင်ရှိပါသည်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားအမည်အားမိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌ရှိ၏, ထိုကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရမည်ဖြစ်သည်သောလူတို့တွင်ပေးထားသည်။ - တမန်တော် 4:12
ငါသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လေသောအခါ, ငါကျမ်းစာထဲမှာအလွန်ကိုမနိုင်။ တကယ်တော့ကျွန်မဘာမျှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ ငါသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါသည်မီ, ငါ Ljungby အတွက် Pentecostal ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနှစ်ခုအစည်းအဝေးများသို့သွားကြ၏။ ဒီအစည်းအဝေးတွေအတွက်ဘာမျှမယူ, ဒါပေမယ့်ငါကငါလိုအပ်ကြောင်းယေရှုနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ခုခဲ့သိတယ်။ ငါကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ချင်တယ်ဆိုရင်ထို့နောက်တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုမေးတယ်။ ငါဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူးသော်လည်း။ ဟုတ်ကဲ့ဖြေကြားသို့မဟုတ်အထူးအကြီးအအသိပညာရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါဒါပေမယ့်ငါတကယ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့သည်! ငါသည်ငါ၏ကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်သညျယရှေုခရစျသလက်ခံရရှိသည့်အခါအဘို့တစ်ခုမှာကယျတငျတျောမူသောအကြှနျုပျ၏စိတျထဲမှာညာဘက်ပဲ!
သငျသညျကမျြးစာကိုအထူးအကြီးအအသိပညာရှိသည်သို့မဟုတ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဖို့တစ်ခုခုယူပြီးရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်သင်၏အသက်တာ၌သခင်အဖြစ်သညျယရှေုခရစျသကိုလက်ခံရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသညျယရှေုခရစျ၏အသကျရှငျပုဂ်ဂိုလျတစျဦးသငျသညျကယျတငျခွငျးခံရမညျဖွစျကွောငျးသင်၏အသက်တာသို့ရောက်ရလိမ့်မည်သာထို့နောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်သင်၏နှလုံးထဲသို့ကြွလာတော်မူသောအခါ, သင်တို့အဘို့တစ်ဖန်ဆင်းခြင်းပါဘူး။ ဒါဟာအံ့ဖွယ်မဟုတ်, သငျသညျကိုသောသူမူကားဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်ကြီးဗဟုသုတအသိပညာများရှိသည်ပေမယ်သညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်ဒါကြောင့်မကူညီဘူး။ သငျသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါသင်တို့သည်နောက်အသိပညာရှိပါကမဟုတ်သလိုကြောင့်အရေးပါဘူး။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိအသနားခြင်းကရုဏာ၏အသင်၏အသက်တာ၌အံ့ဖွယ်စေသည်သောသူမူကားဖြစ်ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ဦးကသငျသညျမှကြွလာနှင့်သင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဖို့အသိပညာရှိရမည်ကပြောပါတယ်ပါကမုသာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးအသိပညာမလိုအပ်လျှင်ဤကသညျယရှေုခရစျသသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်မရသောအသိပညာကြောင်းဆိုလိုသည်။ ဒါဟာထို့နောက်ကယ်တင်ရှင်၏အသိပညာပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမရှိသညျယရှေုဖြစ်တယ်, တစ်ဦးတည်းသူကယ်တင်ရှင်ပါ! သင်လိုအပ်အားလုံးသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ယေရှုခရစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှယေရှုခရစ်ကိုမှသင်၏မျက်စိကွယ်ပျောက်ယူမသွားပါစေပါနဲ့။
သငျသညျသူ့ကိုကျေးဇူးပြုလျက်, ကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုး၌အသီးကိုသီးခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်ကိုသိသောဥာဏ်ထဲမှာကြီးထွားဖို့သခင်ဘုရား၏ခံထိုက်ခြင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်းလမ်းလျှောက်စေခြင်းငှါဒါ။ - ကာဗွန် 1:10
သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆိုပါအသိပညာမဟုတ်သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောခံရဖို့အဘို့, ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအကြှနျုပျတို့သညျဤစာအုပ်ထဲတွင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မည်ဟုအရေးပါသောသည်သမ္မာတရားဖြစ်ပါ၏။ ငါသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လေသောနေ့ရက်ကာလကိုဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်။ ဘယ်အချိန်မှာငါ 20 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ကြှနျတေျာ့စာအုပ်ထဲတွင်ခန့်မှန်း အရှည်ဆုံးညဥ့် ငါငါ၏ကယ်တင်ခြင်းတရားအကြောင်းကိုပြောပြပေမယ့်ကျနော်လည်းခေတ္တကဖြစ်ပျက်ပုံကိုရှင်းပြပါလာမယ့်အခနျးမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။